अशोकको दोश्रो भिडियो खेल्दा साथि भुईकटहरले कति पाए पारिश्रमिक ? बिस्तृतमा हेर्नुस् (भिडियो सहित) – Nepali Profile
अशोकको दोश्रो भिडियो खेल्दा साथि भुईकटहरले कति पाए पारिश्रमिक ? बिस्तृतमा हेर्नुस् (भिडियो सहित)
Posted on August 6, 2018 by रोशन राना
ईटहरी/ युट्युबबाट चर्चामा आएका बालगायक अशोक दर्जीको दोश्रो गीत पनि सार्बजनिक भैसकेको छ । कुरा यति मात्र हैन भिडियोमा उनका साथि भुईकठरले अभिनय गरेको छ । भिडियो सार्बजनिक भएपछी यहा प्रश्न पनि केहिले गरिरहेका छन् कि भुईकटहरले अभिनय गरेबापत के पाए ?
मन्जुल मितेरीले उनलाई निकै ठुलो साथ र सहयोग गरेका छन् । यति मात्र हैन उनलाई अभिनय गरेबापत उक्त सार्बजनिक कार्यक्रममै १० हजार पारिश्रमिक हस्तान्तरण गरिएको छ । यता दिपक न्यौपानेले अशोकलाई पनि सफलताको सुभकामना दिएका छन् ।
हिले उक्त भिडियो युट्युब नेपालको ट्रेण्डिङ्गको अग्र स्थानमा कब्जा जमाईरहेको छ । एक कार्यक्रम नै आयोजना गरेर सार्बजनिक गरेको भिडियोलाई छोटो समयमै लाखौ पटक हेरिएको छ । हेर्नुस बिस्तृत सहितको भिडियो
क्यान्सर भएपछि यस्ती देखिइन् बलिउड अभिनेत्री सोनाली, किमो लिएपछि सोनालीको टाउको मुडुलोसाउदी अरब जेलबाट नेपाल आउँदा प्रेमबहादुरका आमा,श्रीमती र छोरिको खुशीको आशु थामिएन,सबैको सहयोगले नानीले बाबा भन्न पाइन् : श्रीमती [भिडियो सहित ]